Xildhibaanno Dalbaday In Dib U Eegis Lagu Sameeyo Hishiishyada Uu Galay Madaxweyne Farmaajo – Kalfadhi
Xildhibaanno Dalbaday In Dib U Eegis Lagu Sameeyo Hishiishyada Uu Galay Madaxweyne Farmaajo
Xildhibaanno gaaraya 10 mudane kana tirsan Golaha Shacabka ayaa u gudbiyay guddoonka Golaha Shacabka warqad ay ku dalabanayaan in dib u eegis lagu sameeyo hishiisyada iyo is-afgaradyada uu madaxweyne Farmaajo galay tan iyo markii xilka qabtay.
Warqadda ayaa u qorneed sidan,
Markii aan aragnay: Qodobka 1aad, Qodobk 9-aad farqaddiisa Q, Qodobka 61-aad farqaada 1aad, Qodobka 69-aad farqadiisa 2B ee Dastuurka Soomaaliya iyo Qodobka 2-aad Farqada P, Qodobka 78-aad ee Xeerka-Hoosaadka Golaha Shacabka;
Markii aan u kuurgalnay: Socdaallada madaxweynaha ee dalka Eritrea iyo Ethiopia iyo hishiisyada aan la shaacin ee la sheegay in lala galay dowladahaas.
Markii aan tix galinay: Xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee dalkeena ku suganyahay iyo baahiyaha loo qabo in si weyn looga fiirsado hishiisyada aan la galayno dalalka shisheeye, innaga oo wali la daalaa dhaceyno soo kabashada burburkii dowladnimo.
Markii aan aragnay: Wararka sheegaya in Madaxwaynahu galay hishiis looga gol leeyahay in Soomaaliya lala mideeyo dalalka Ethiopia iyo Eritrea sida uu caddeeyay Ra’iisul-Wasaaraha Ethiopia.
Markii ay noo caddaatay: in hishiisyada kor ku xusan lagu go’doominayo walaalahayn Djabuuti oo dadaal ballaaran u galay soo celinta dowladnimadii Soomaaliya nagana dhaxeeyo dhiig iyo dhaqaale lama taabtaan ah.
Markii aan garawsanay: In hishiisyada kor ku xusan ay baritaarayaan Eritrea oo walaalahayn Djbuuti si gardarro ah uga haysato dhul iyo dad, waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa Golaha Shacabka in la furo dood ku saabsan;
1-hishiisyada iyo Is af-garadyada lala galay dalalka shisheeye intii uu talada dalka hayay Madaxweyne Maxamad Cabdullaahi Farmaajo .
2- Joogitaanka iyo keenista ciidan hor leh oo ka socda dowladaha Ethiopia iyo Eritrea oo qayb ka ah hishiiska la sheegay in lagu midaynayo seddaxda dal .
3- Cawaaqibka siyaasadeey ee ka imaan karo marti galinta shirka seddax geesoodka ah lagu wado in uu ka dhaco magaaladda Muqdisho iyada oon Ummadda loo soo bandhigin waxa lagu hishiiyay isla markaana aysan walaalaha Djabuuti qayb ka ahayn .
Halkaas ka akhriso magacyada xildhibaannada gudbiyay.